यस्तो छ सुजुकी बलेनो १.२ (भिडियो सहित) | नेपाल आज
बिहिबार, ०७ चैत २०७५ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । कारमा सरर्र...... यात्रा । साथमा मन मिल्ने साथी अनि घुम्न कुनै टाढाको रमणीय वातावरण होस् । अझ यात्रामा आफ्नै सुविधाजनक कार भैदियोस् । कति मजा हुन्छ होला ।
यात्रामा हामीले प्रयोग गर्ने गाडीले पनि यात्राको रोमान्चकताको करिब ४० प्रतिशत स्थान ओगट्ने गर्छ । अझ आजभोली त सवारी साधननै घुमफिर र यात्राको पहिलो सहयात्री बन्ने गरेको छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने गाडी आकर्षक, लग्जरी, मजबुद र शक्तिशाली पावर पिकअपयुक्त हुनु आवश्यक छ । र शुरक्षित र भरपर्दो हुनु पनि त्यतिनै आवश्यक छ । अनि कुरा आउछ माइलेजको ।
लामो यात्रामा निस्कदा गाडी कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने कुरा गाडीले दिने माइलेज अर्थात् तेल खपतको विषयले पनि फरक पार्छ । लामो दुरीमा थोरै तेल खपत गर्ने गाडी नै बढि बढी उपयोगी मानिन्छ । त्यसैले हामीले गाडी किन्दा लुक्स पावर पिकअपको कुरा त छदैछ त्यसपछि महत्वपूर्ण विषयको रुपमा गाडीको माइलेज हेर्ने गर्छौ । के पाइएला त यी सबै विशेषताले भरिपूर्ण गाडी ?
अवस्य पाइन्छ । किनकी यी सबै विशेषताले भरिपूर्ण सवारी तपाई–हाम्रै बजारमा उपलब्ध छ । त्यो हो मारुती सुजुकीको उत्कृष्ट बलेनो ।
बलेनो विश्व प्रसिद्ध कार हो । पछिल्ला दिनहरुमा यसले आफ्नो साख विश्वभर आर्जन गर्न सफल छ । आज भरतबाट विश्व बजारमा निर्यात हुने कारहरुमा बलेनो शीर्ष स्थानमा आउछ । एसिया तथा युरोपका बजारमासमेत बलेनो निर्यात हुने गर्छ । यो कार आधुनिक सुविधा र विशेषताका कारण विश्व बजारमा चर्चित छ । उत्कृष्टताकै कारण बलेनो अटोबजारमा सबैको आकर्षणको केन्द्र समेत बनिरहेको छ ।
मारुती सुजुकी बलेनो भारतमा निकै रुचाइएको कार हो । हालैमात्र भारतीय बजारमा यसको ५ लाख युनिट बिक्री भएको छ । कम्पनीले सो आँकडा केवल ३८ महिनामा पार गरेको हो ।
इन्डो–जापानी कार निर्माता कम्पनीको मारुती सुजुकी बलेनो सबैभन्दा पहिले भारतमा अक्टुबर २०१५ मा लन्च गरिएको थियो । अहिले यो कार विश्वका धेरै मुलुकमा उपलब्ध छन् । उत्कृष्ट कारको रुपमा स्थापित बलेनो ए टु प्लस सेगमेन्टले भारतीय बजारको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल छ ।
२०१८ र १९ को ६ महिनामा मात्र बलेनोको बिक्री २०.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । योसँगै बलेनो सन् २०१६ मा भारतको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कार मध्ये उत्कृष्ट १० मा पर्न समेत पर्न सफल भएको थियो ।
आज हामी तपाईसँग बलेनोमा १.२ लिटर पेट्रोल इन्जिनयुक्त गाडीको कुरा गर्दैछौं । बलेनो फोर–सिलिन्डर ड्यूलजेट पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध कार हो । यसले ६ हजार आरपिएममा ६२ किलोवाटको अधिकतम पावर प्रदान गर्छ भने, ४ हजार आरपिएममा ११५ एनएमको अधिकतम टर्क उत्सर्जन गर्छ ।
बलेनो फूल अप्सन म्यानुअल र अटोमेटिक दुबैमा उपलब्ध छ । पाँचगियर बक्ससहितको बलेनोमा १ दशमलभ २ भिभिटी इन्जिनको प्रयोग गरिएको छ । कारमा ईबीडी सहितको एबीएस ब्रेकिङ्ग सिष्टम जडान गरिएको छ ।
बलेनो पेट्रोल इन्जिनमा अहिलेसम्मकै उच्च माइलेज दिने कार मानिन्छ । यसले अधिकतम २२.४ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ ।
पछिल्लो सयम बलेनोले बजारमा आक्रामक रुपमा व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । आज जोकोहीलाई बलेनोले सजिलै तानेको छ । त्यसोत बलेनोले मात्र होइन सुजुकीका हरेक उत्पादनले नेपालीहरुको मन जितेको छ । हरेक सुजुकीका उत्पादनहरुलाई नेपाली बजारले स्विकारेको छ । अझ त्यसमा बलेनोको उत्कृष्ट्रताले त झन् सुजुकीको साख नै उच्च बनाएको छ ।
त्यस्तो के छ त बलेनोमा ?
बलेनो कारमा एप्पल कार प्ले सिस्टम उपलब्ध छ । यसको साथै एलईडी डेटाइट रनिङ ल्याम्प्स, एलईडी टेल ल्याम्प्स जस्ता फिचर्स पनि समावेश गरिएको छ । सो कारमा एन्टीथेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, एबीएसको साथ ईवीडी, डुअल एयरब्याग्स र फ्रन्ट सिटवेल्ट प्री–टेनर्स र फोर्स लिमिटर्सको जस्ता सुरक्षा सुविधा उपलब्ध छ ।
सुजुकी बलेनो आकर्षक र बोल्ड लुक्समा आएको छ । कारको अग्र भागमा भि सेभको आकर्षक ग्रिल छ । जसमा क्रोमले कभर गरिएको छ । कम्पनीले कारको लुक्स आकर्षक देखाउने भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ ।
बलेनो ३ हजार ९ सय ९५ एमएमको लम्बाई, एक हजार ७ सय ४५ एमएमको चौडाई र १ हजार ५ सय एमएमको उचाईमा उपलब्ध छ । यो ह्याचब्याग सेग्मेन्टमा अहिले सम्मकै प्रिमियम र लामो साइजमा आएको कार हो ।
कारको तल्लोभागमा फोकस लाईट राखिएको छ । अन्धकार रातमा वा जाडो समयमा तुवालो वा कुईरो लागेको समयमा यो लाइटले चालकलाई सहजता प्रदान गर्छ ।
यसको ठीकमाथि एलईडी प्रोजेक्ट हेडलाईट रहेको छ । जसमा डेलाईटसमेत प्रदान गरेको छ । कारको लुक्सलाई अझ विशेष र आकर्षण बनाउन हेडलाइटलाई जनावरको आँखाको सेप दिइएको छ । जसमा गाजल लगाएको हो कि रु जस्तो भान पर्ने गरी डिजाइन पनि गरिएको छ । जुन हेर्दा आकर्षक लाग्छ ।
साईड लुकिङ्ग ग्लास
–बलेनोमा दायाँ बायाँ दुबैतर्फ एड्जस्टेबल क्लियर लुकिङ्ग ग्लास छन् ।
–लुकिङ ग्लासमै साइड लाइट राखिएको छ ।
प्रिमियम बलेनोको ढोका बलिया रहेको कम्पनीको दावी छ । ढोकाको उचाई पनि परिष्कृत छ । कारभित्र पस्न वा निस्किन सजिलो हुने गरी उचाई कायम गरिएको छ । ढोकाको नियन्त्रण रिमोटबाट समेत हुन्छ । डुअर ह्यान्डलमै पनि लक÷अनलक बटम उपलब्ध छन् । कारको शिशा खोल्न बन्द गर्न बटन थिचेकै भरमा गर्न सकिन्छ । ढोकामै पानीको बोटल राख्ने स्पेस छ । स्टील क्रोमसहितको ह्यान्डलले कारलाई आकर्षक बनाएको छ ।
बलेनोमा स्टिल कभरयुक्त एलो ह्वील प्रयोग गरिएको छ । कारमा अगाडिको टायर १८५र६५ आर १५ र पछाडि १९५र५५ आर १६ साइजको हुन्छ ।
ह्याजब्याग सेग्मेन्टको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बलेनोमा १७० एमएमको उच्च ग्राउण्ड क्लियरेन्स राखिएको छ । जसका कारण अफरोडमा समेत बलेनो नम्बर एक प्रमाणित हुन सक्छ । सामान्य कच्ची तथा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बलेनो सजिलै ड्राईभ गर्न सकिन्छ ।
कारमा अगाडि डबल वाईपर छ । बलेनोको पछाडि शिशामा समेत कम्पनीले वाईपर जडान गरेको छ ।
गाडीको भित्री भागमा प्रयाप्त स्पेस राख्ने कोसिस गरिइको छ । ५ सिट क्षमताको बलेनोमा एड्जष्टेबल सिटहरु छन् । यसलाई आवश्यकताअनुरुप फोल्ड गर्न र मिलाउन सकिन्छ । सिटहरुलाई आरामदायी र टिकाउ बनाउन कम्पनीले फाईब्रिक कबर प्रयोग गरेको छ ।
बलेनोमा १७० लिटरको फराकिलो बुथस्पेस रहेको छ । यसमा आवश्यकता अनुसार पछाडीको सिटहरुलाई फोल्ड गरेर अझ बढाउन सकिन्छ ।
मारुती सुजुकी बलेनो सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले निकै अब्बल रहेको छ । कारमा डुअल एयर ब्याग छ । बलेनोको बडी निर्माणमा खास महत्व दिएको पाइन्छ । बडी बलियो बनाउने आधुनिक तौरतरिका र विधि प्रयोग गरिएको छ । यसका च्यासिसदेखि बाहिरी बडीमासमेत बलियो मेटलको प्रयोग भएको छ । कार ठूलै दुर्घटनामा परे पनि यात्रुलाई सकुशल राख्न बडी क्याक रुफ बनाइएको छ ।
हाल नेपाली बजारमा बलेनोको मूल्य ३२ लाख ८९ हजार देखि ३८ हजार ९९ हजारसम्म रहेको छ ।
नेपाली बजारमा कहाँ कहाँ उपलब्ध छ बलेनो ? कुन ठाउँकाले कहाँ संपर्क राख्ने ?
काठमाडौं बाहिरका शोरुमहरु.....
बाग्लुङ्ग ९८५६०३०८३६, भैरहवा ९८५७०३०१२१, बिराटनगर ९८०२७११०५, बिरगञ्ज ९८०६८०११७५, बिर्तामोड ९८०२६७८१४४, बुटवल ९८४७०६८६७८, डडेलधुरा ९८५१०९०४३२, दमक ९८५२६७६३२७, दमौली ९८५६०३६९०६, दाङ ९८५७८३०६१४, धनगढी ९८०१७२२२३९, हेटौडा ९८४१७७१६६४, इटहरी ९८५२६७९१८८, जनकपुर ९८४४०५५०७२, कपिलवस्तु ९८५७०६१६०६, कावासोती ९८०८१८८९६६, लहान ९८०१५००७५०, महेन्द्रनगर ९८४९१०३१५८, नारायणगढ ९८५५०५३३५६, नेपालगञ्ज ९८५८०२५५६७, पोखरा ९८५६०२०१६९, सुर्खेत ९८४८२८७४३८, वालिङ ९८५६०२४७९५ मा सक्पर्क राख्न सकिने छ ।